Doorka Haweenka ee siyaasadda dalka oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Kulan ay isugu yimaadeen ururrada haweenka ee ka jirta caasimadda, isla markaana ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayay doorka haweenka ee siyaadda ku leeyihiin iyo qoondada ay horey dowladda u balan qaaday ee ah in 30% ay haweenku leeyihiin baarlamaanka.
Qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka hadlay ayaa yiri “Haweenku waa udub dhexaadka dhismaha Dowladnimada Soomaaliya, waxaan doonaynaa inaan helno xaqeena ay ku leenahay baarlamaanka iyo Hay’adaha Dastuuriga ee dalka”.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Marwa Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa sheegtay in haweenku ay udub dhexaad u yihiin Nabadda iyo horumarka muhiimna Ay u yihiin dhismaha Dowladnimada.
“Horumar iyo Nolol waxa ay ku xeranyihiin Haweenka, waxaan doonaynaa in aan helno Qoondada Barlamaanka cusub ee dalka waliba labada Aqal” ayay tiri Marwo Batuulo.
Wasiiro Dowlaha Wasaarada Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa haweenka u muujiyay kalsooni iyo sida Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay uga go’antahay in Haweenku helaan Qoondada Barlamaanka cusub.
“Waxaan idin balan qaadaynaa inaan ku dadaalno helidda qoondada Barlamaanka cusub, waxaana loo baahan yahay dadaal wadajir ah, waan aaminsanahay in haweenku waxqabad leeyihiin, waxaana rajaynaynaa inaad heshaan balanqaadkiina” ayuu yiri Wasiiru dowlaha Arrimaha gudaha.
Xildhibaan Maryan Qaasim oo kulan soo dhaweyn ah loogu sameeyay dalka Thailand “SAWIRRO”